မင်းသမီး Emma Watson ဟာပလပ်စတစ်ပုလင်းထဲကစားဆင်ယင်အတွက် Met Gala ဆီသို့ရောက် လာ. ,
အများပြည်သူနှစ်ပတ်လည်သာ costume Institute က Ball ကိုမှလာသောမတ်မတ်နာမည်ကြီးတွေဆွေးနွေးရန်နေဆဲဖြစ်သည်။ မင်းသမီး Emma Watson ဟာများစွာသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မတူဘဲ, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသင်္ကန်းအတွက် seductive ပုံစံများ၏ညနေပိုင်းတွင်အပေါ်တုံ့ပြန်လေသည်သူဓိပ်ပာယျနှငျ့လမ်းကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးစားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်။
အဆိုပါ Met Gala ၏ဆောင်ပုဒ်သည်ယခုနှစ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများအကြားအပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြယ်ပွင့်အနာဂတ်ဝတ်စုံ, ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်သတ္တုတောက်ပသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောပိတ်ထည်လုပ်ထားတဲ့ဆင်မြန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်, စာသားကဒီစိတ်ကူးကိုယူ။
နောက်ဆုံးပေါ်စိတ်ကူးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများမှအဝတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းဖို့ဆုံးဖြတ်သောသူသည် 26 နှစ်အရွယ်မင်းသမီး Emma Watson ဟာ, စိတ်ထဲသို့ရောက်ကြ၏။
မင်းသမီး Emma Watson ဟာတစ်ဂိုဏ်းစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့
ထွက်ရှိသောအဆိုပါဒစ္စနေး Princess ၏အခန်းကဏ္ဍကို fit မညျ့သူ 15 နာမည်ကြီးတွေ!
"ဟယ်ရီပေါ်တာ" ၏ကြယ်ပွင့်အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်နာများ Calvin Klein နဲ့ Eco ခေတ်ကုမ္ပဏီနှောင့်အယှက်ပေးသောကျော်ပြန်လည်ပုလင်းမှရရှိသောတစ်ရှူးကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်စားဆင်ယင်-ဝတ်စုံအတွက်မြို့တော်ပြတိုက်၏လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် paraded ။
မိမိတို့အဝတ်ကိုအပေါ်တောင်မှဇစ်ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းအမျှင်များ၏လုပ်ခဲ့ကြသည်။ တရားမျှတမှုအတွက်ကြောင့် Watson ရဲ့အဆင်ပြေဘို့, အပ်ချုပ်ဆိုင်ကသဘာဝချည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွင်းပိုင်းနံရံဘော်လီကိုဖန်ဆင်းကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။
စကားမစပ်မသာပုံမှန်မင်းသမီး Emma စားဆင်ယင်ပြန်လည်အသုံးပြု။ ပါတီရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေ Lupita Nyong'o နှင့် Margot ရော်ဘီသည်ထင်ရှား။ ,
နောက်ကျောကိုအတူတကွ Janet Jackson ကနှင့် Jermaine Dupri?
ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်များ Pirelli-2017: UmaTurman, နီကိုးလ် Kidman, ရော်ဘင် Wright, Julianne Moore က
Lindsay Lohan ကသူ့အာရုံမှရောက်လာပြီ: တီဗီစီးရီးအတွက်ကြယ်ပွင့်နှင့်ချစ်ခြင်းဖြစ်ရပ်အတွက်ပါဝင်
Scientologists သတို့သမီး Tom Cruise နဲ့ရှာခြင်းငှါ
Emaciated Britney Spears ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များတွင်ကြယ်ပွင့်
Brad Pitt နဲ့အိန်ဂျလီနာဂျိုလီရဲ့မဖြစ်နိုင်၏ပြန်လည်ဆုံဆည်း?
အသက်ပျိုစဉ်အခါများတွင် Bradley Cooper သူမ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်အတူကိစ္စ ပတ်သက်. Philadelphia တွင်နေ့စဉ်သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယျ
Rita Ora ခဲမိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေပေါ်မှာအနားယူ, ရှင်းလင်းသော left
Gwen Stefanie နှင့် Blake က Shelton ဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏တွစ်တာကလေးရုပ်ပုံများပေါ် profile များကိုထား
မိသားစု Kardashyan စိတ်ဝင်စားဖို့အနေအထားတွင်အငယ်ဆုံးကလေးက
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 26 ရက်သတ္တပတ် - မည်မျှလအတွင်းပါသလဲ
ဂျော်နီ Depp နဲ့ Vanessa Paradis
Hypertonic ဆားဖြေရှင်းချက် - ကုထုံးဂုဏ်သတ္တိများ
ဟယ်လင် Mirren အရှိဆုံးညစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကတိပြုထားသည်!
ဟေလာရီ Duff နဲ့ Jason Walsh တာဝန်မရှိဘဲဖြစ်ပေါ်
ကုမ္ပဏီအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရက်နေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း?
နစ်မြုပ်မှုအတွက် sensor faucets
ပရိဘောဂ - ဇယား
ကြွင်းသောအရာစိတျနှလုံးအမောများအတွက်မဟုတ်ပါ: TOP-21 အန္တရာယ်အရှိဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များ
Buckwheat အစားအသောက်များတွင်: စာရွက်